ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय छौं : भिटोफ अध्यक्ष पौडेल – Arthik Awaj
ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय छौं : भिटोफ अध्यक्ष पौडेल
By आर्थिक आवाज २०७४ पुष १७ गते सोमबार १६:१९ मा प्रकाशित
रवीन्द्र राज पौडेल
गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ), कास्की
शहरदेखि दुरदराजमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरुको खोजी गर्दै गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहेको संस्था हो गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) । भिटोफको कास्की शाखा प्रदेश नं. ४ क्षेत्रको ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय हुँदै आइरहेको छ । यसैक्रममा भिटोफ प्रदेश ४ का अध्यक्ष रवीन्द्रराज पौडेलसँग गाउँ पर्यटनका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीको सारः
गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) कस्तो संस्था हो ?
नेपालका हरेक क्षेत्रले पर्यटकीय सम्भावनाहरु बोकेका छन् । हाम्रो पर्यटन शहर केन्द्रित छन् । तर शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी पर्यटकीय सम्भावनाहरु छन् । नेपालको दीगो पर्यटन विकासका लागि ग्रामीण पर्यटनको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गरी स्थानीय कला, संस्कृति, जीवनशैलीको संरक्षण गरी जिविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने पवित्र लक्ष्यसहित यस संस्थाको स्थापना भएको हो । २०५४ सालमा स्थापना भएको यस संस्थाको कास्की शाखा २०७१ मा स्थापना भएको हो । हामी प्रदेश ४ का ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा सक्रिय छौं । विशेष गरी होम स्टे प्रवद्र्धन हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ ।
होम स्टे व्यवसायले पर्यटनमा कस्तो भुमिका खेलेको छ ?
पोखरा उपत्यकाको मात्र नभई यस आसपासका ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । पर्यटकको बसाईं लम्ब्याउन ग्रामीण क्षेत्रले सहयोग पु¥याउँछन् । ग्रामीण पर्यटनको अवस्था सुधारोन्मुख छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक पुर्वाधारका साथै पर्यटनमैत्री वातावरण विकास गर्नु आवश्यक छ । होम स्टेको अवधारणाले ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रमा विशेष भुमिका खेलेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकको चाप बढेसँगै पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा हेर्ने हो भने होम स्टे होटल व्यवसायमा परिणत हुने अवस्था छ ।
स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा यसले कसरी सहयोग गरेको छ ?
हरेक गाउँ पर्यटकीय ठाउँ भनेर हामी अघि बढिरहेका छौं । ग्रामीण वातारण सुन्दर, शान्त र हरियाली हुने हुँदा पनि पर्यटकको रोजाईमा पर्ने विश्वास हामीलाई छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि चलायमान बनाउनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रवद्र्धन एवं बजारीकरणमा पनि ग्रामीण पर्यटनले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थानीय उत्पादनको प्रचाप्रसार भएको छ ।
होम स्टे सञ्चालनमा तपाईंहरुको भुमिका के छ ?
नेपाल सरकारको अवधारण अनुसार पुर्वाधार निर्माण गरी गाउँगाउँमा होम स्टे सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास हामीले गरेका छौं । विभिन्न तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा हामीले मध्यस्तकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेका छौं । हाम्रो कार्यक्षेत्र प्रदेश नं ४ हो र यस क्षेत्रका करिब ३२ वटा होम स्टे हाम्रो मातहातमा छन् । तिनलाई विभिन्न तालिमको व्यवस्था गरी सुधार गर्दै अगाडि बढाएका छौं । नेपाल बोर्डसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाएका छौं । कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा, पर्वत लगायतका जिल्लामा रहेका विभिन्न होम स्टेसँग सहकार्य र समन्वय गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
पर्यटकको रोजाईंमा होम स्टे पर्न सकेको छ ?
आन्तरिक तथा बाह्य दुवै पर्यटकको रोजाईमा होम स्टे पर्ने गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा गएर रमाउने पर्यटकको लागि बास बस्न उपयुक्त स्थान होम स्टे नै बन्न थालेका छन् । होम स्टेले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाबाट पर्यटक सन्तुष्ट भएको हामीले पाएका छौं । नवलपारसीको अमलटारी, लमजुङको काउलेपानीलाई हामीले उदाहरणको रुपमा हेर्न सक्छौं ।
पर्यटकको सुविधाका लागि पर्यटन बोर्डले सटल बस सेवा सञ्चालन गर्ने